सहिद रामवृक्ष यादवको रगतमाथि खेलबाड – eratokhabar
सन्दर्भ : रामवृक्ष स्मृति दिवस
ई-रातो खबर २०७८, १० भदौ बिहीबार १०:५६ August 26, 2021 1259 Views
सहिद रामवृक्षको वास्तविक जीवन वर्गसङ्घर्षबाटै सुरु भयो र सहादत पनि वर्गसङ्घर्षको बीचबाटै भयो । रामलखन यादव र सम्पत्तिदेवी यादवको कोखबाट २००३ सालमा कमरेड रामवृक्ष यादवको जन्म भएको हो । मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर पनि उहाँले निकै अभाव र कष्टकर जीवन बिताउनुभयो । सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्दै जाँदा गरिब किसान वर्गमा बदलिनुभयो । तराई मधेसमा हुने सामन्ती उत्पीडन र त्यसको प्रभावविरुद्ध किशोर अवस्थादेखि नै उहाँमा घृणा देखिन्थ्यो । क्रान्तिकारी राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि २०२५ सालमा बर्मझियाकै प्राविमा प्राधानाध्यापक भई शिक्षण पेसामा रहनुभयो । त्यतिबेला उहाँ हिन्दूवादी चिन्तनमा आधारित किर्तन मण्डली (सांस्कृतिक टोली) मा क्रियाशील हुनुभयो । पछि त्यही टोलीलाई संगठनको आधार बनाउँदै सामन्ती जमिनदार विरोधी गीत–सङगीतको थलो बनाउनुभयो । २०२९ सालमा क्रान्तिकारी योद्धा कमरेड ऋषि देवकोटा (आजाद) सँग सम्पर्क भयो । त्यसपछि उहाँ निरन्तर क्रान्तिकारी पार्टी र आन्दोलनमा क्रियाशील हुनुभयो ।
२०३० सालतिर धनुषा र तराई–मधेषमै पनि सामन्तहरूले कम ज्याला दिएर किसानलाई दिनभरि काम लगाउँथे । किसान झण्डै अर्धदास अवस्थामा थिए । त्यसका विरुद्धमा बनी आन्दोलन (ज्यालादारी आन्दोलन) संचालन गरी सफल पार्नुभयो । त्यस आन्दोलनको अगुवाई गरेको आरोपमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले उहाँलाई जनकपुरबाट पक्राउ गरेर ६ महिनासम्म जलेश्वर जेलमा बन्दी बनायो । त्यहाँबाट छुटे पनि २०३० सालमा तत्कालीन नेकपा (चौम) बाट उहाँले पार्टीको सदस्यता लिनुभयो । २०३४ सालमा शिक्षक पेसामा नै रहेको बेला कमलानदी छेउको बाह्र विघा ऐलानी जमिन सुकुमबासीहरूलाई बितरण गर्नुभयो । त्यही निहुँमा उहाँलाई पुनः गिरफ्तार गरी जेल हालियो । २०३५ सालमा शिक्षण पेसाछोडी पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा क्रियाशील हुनुभयो ।
२०४२ सालको पार्टी विभाजनपछि उहाँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) मा क्रियाशील हुनुभयो । २०४५ सालको किसान आन्दोलनमा उहाँले सक्रियतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । त्यही निहुँमा २०४६ जेठ ६ मा उहाँलाई गिरफ्तार गरी जेल हालियो । जेलभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा उहाँको रिहाइको चर्को आवाज उठिरहँदा पनि उहाँलाई अन्तत २०४९ सालमा मात्रै रिहाइ गरियो । जेलमुक्त भएपछि उहाँले पटेरवाको करिब अढाईसय विघा जमिन किसानहरूलाई बितरण गर्नुभयो । २०५१ भदौ १ गतेको नेपालबन्द कार्यक्रम सफल पारी भोलिपल्ट भदौ २ मा आफ्नो गाउँमा फर्किंदै गर्दा सिभिल डे«सका पुलिस र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय योजना मुताबिक लठैतहरू लगाई बर्मझियामा नै उहाँको अमानवीय ढङ्गले हत्या गरियो । त्यसबेला उहाँ नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
क्रान्तिप्रति निःस्वार्थ : निष्ठा
क. रामवृक्ष यादवका धेरै गुणहरू थिए । मृदुभाषी सरल, शालीन र मिलनसार व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो । तथापि उहाँको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण गुण निःशर्तः वर्ग र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा थियो । आज पनि उहाँका सपना साकार पार्न हामी सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छौं तैपनि उहाँमा देखिने निःस्वाथर्ः र निःशर्तता सिङ्गो पार्टीमा र तराई–मधेसमा पनि निकै कमजोर छ । क्रान्तिकारी कम र क्रान्तिप्रेमी बढी हुने । पार्टीमा लाग्ने तर दुःख कष्ट बेहोर्न नपरोस् भन्ने ठान्ने । छोराछोरी राजनीतिमा नजाऊन्, पढाइ नछुटोस्, सम्पत्ति नघटोस्, बन्द–व्यापार चलिराखोस्, पुराना सम्बन्ध नभत्कियोस्, त्याग–तपस्या र बलिदान अरुले गरून् आफू नेता भइराख्नुपाईयोस् जस्ता चिन्तनहरू हावी छन् तर रामवृक्षमा त्यसप्रकारको व्यवहार र चिन्तन दुवै थिएन । त्यसबेलाका उहाँका साथीहरूका अनुसार उहाँ पार्टी र सङ्घर्षको निम्ति आफ्नो सम्पत्ति बेच्दै जाने, परिवार सबैलाई पार्टीकरण गर्दै लैजाने, वर्गसत्रुसँग नझुक्ने, वर्गप्रति गहिरो निष्ठा, भाव र समग्ररूपमा सर्वहारावर्गकरण गर्ने जस्ता कम्युनिस्ट गुणहरू उहाँमा थिए । त्यसको प्रभाव उहाँका परिवारमा प्रस्टसँग देखिन्थ्यो । जतिबेला उहाँको हत्या भएको थियो, त्यसबेला उहाँको घरमा एक गेडा अन्न पनि थिएन र सायद उहाँसित एक रूपैयाँ पनि थिएन, तैपनि उहाँ पार्टी, क्रान्ति र वर्गको लागि निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो ।
आज धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूको परिवारमा पार्टी र आन्दोलनप्रति नराकात्मक प्रभाव विकास हुँदै गएको छ । नेता–कार्यकर्ताका परिवार पार्टी र क्रान्तिमा क्रियाशील नहुने भए पनि समर्थक मात्र हुने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, नेता कार्यकर्ता आफैँले आफ्नो परिवारलाई पार्टी र क्रान्तिमा योजनाबद्ध ढङ्गले नलिने, अझ कतिले त म लागेँ तर तिमीहरू नलाग भन्ने । घर वा डेरामा पार्टी नेता वा कार्यकर्ता नलाने, लगिहाले पनि परिवारका सदस्यहरूलाई नचिनाउने जस्ता काम गरेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा खतरनाक प्रकृतिको रूपमा प्रचण्ड स्कुलिङ विकास भएको छ । क्रान्ति र पार्टीको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने आलिसान जीवन बिताउने जस्ता गैर–सर्वहारा र घृणित कार्यशैली विकास भइरहेको छ । पार्टी र क्रान्तिमा आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट कुनै योगदान नगर्ने यतिसम्म कि एक दिन पार्टीकाममा हिँड्दा पनि पेट्रोल मागिहाल्ने र दुई–चार कल फोन गर्नुपरेपछि रिचार्जकार्ड मागिहाल्नुपर्ने मानसिकता निकै हावी देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीको स्रोत–साधन र अवसरका वितरणमा निकै असमानताहरू छन्; जसले गर्दा त्यसको नकरात्मक असर पार्टी र आन्दोलनमा पनि देखापरेको छ । यतिसम्म कि कैयाैँ नेताहरूको वर्गोत्थानसमेत भएको छ ।
क. रामवृक्ष यादव भने विल्कुल फरक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सिङ्गो परिवारलाई पार्टी र क्रान्तिबारे बुझाउनुभयो । दाजुभाई, छोराछोरी, श्रीमतीलाई पार्टीको काममा लगाउनुभयो । वर्गदुश्मनबारे बताउनुभयो । पार्टीप्रति विश्वास दिलाउनुभयो र क्रान्तिमा सँगसँगै होमिनुभयो । जसले गर्दा उहाँका परिवारका तीनजना सदस्यहरूले क्रान्तिमा बलिदान गरे । परिवारका सदस्यहरूको पार्टीप्रतिको विश्वास र बलिदानी भावनाले त्यो कुरा पूर्णरूपले प्रमाणित गरिसक्यो । आज पनि बाँचेका परिवारका सदस्यहरू कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन वरिपरि क्रियाशील छन् ।
वहुमुखि प्रतिभाका धनी
क. रामवृक्ष यादव तराई मधेसको एक मात्र चौतर्फी प्रतिभाशाली नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वैचारिक राजनीतिक रूपले प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो । जहिले पनि पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरका गैरसर्वहारा प्रवृत्तिविरुद्धको राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्षमा क्रान्तिकारी धारमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो । उहाँ भौतिक र मानसिक दुबै रूपले लडाकु हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कुशल संगठक पनि हुनुहुन्थ्यो साथै, श्रमजीवी साहित्य र सङगीतमा राम्रो दख्खल राख्नुहुन्थ्यो । “पेरुमे लाल झन्डा फहरारे” भन्ने उहाँको चर्चित गीतसँगै उहाँले मैथिली, हिन्दी र नेपालीमा गीत–सङगीत रचना गर्ने र गाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँका पचासवटा जति रचना प्रकाशित छन् भने त्यतिकै संख्यामा अप्रकाशित छन् । उहाँ जनसेवक र जनप्रिय हुनुहुन्थ्यो । गाउँ–समाज आफन्त सबैलाई उहाले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । वास्तवमा क. रामवृक्ष यादव जनताको आँखाको नानी हुनुभयो । समग्रमा उहाँ तराई–मधेस मात्रै होइन, फेरि पनि समग्र क्रान्तिको एक चौतर्फी प्रतिभाशाली नेता हुनुभयो ।
जनयुद्धको तयारीमा उर्जा ।
क. रामवृक्षको सपना नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद हुँदै विश्वसाम्यवादमा पुग्ने थियो । रामवृक्षले चाहेको त्यो वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति समग्र ढङ्गले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको विकास गरी क. विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । यो पार्टीले नै कमरेड रामवृक्ष यादवको सपनालाई साकार पार्नेछ । नेपाली समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा लैजानेछ । कमरेड रामवृक्ष यादव लाल सलाम ! क. रामवृक्ष यादवले देखाएको बाटोमा अघि बढौँ ।
२०७३, २१ असोज शुक्रबार १८:०५